मेस्सी कि नेयमार? आर्जेन्टिना कि ब्रजिल? कोपा अमेरिका २०२१ कसले जित्ला? – Khabar Patrika Np
मेस्सी कि नेयमार? आर्जेन्टिना कि ब्रजिल? कोपा अमेरिका २०२१ कसले जित्ला?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २६, २०७८ समय: १८:४२:३५
ब्रजिलका कट्टर नेपाली समर्थक नुतन बज्राचार्यलाई यस पटक कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता खल्लो लागिरहेको छ। युरोपका सहरहरूमा भरिभराउ दर्शकमाझ उचाइ छोइरहेको युरो २०२० ले ब्रजिलका बन्द रङ्गशालामा चुपचाप चलिरहेको कोपा अमेरिकालाई नराम्ररी छायामा पारेको देखिन्छ।
र, त्यसलाई पछ्याइरहेका विश्वभरका दर्शकहरूलाई पनि। ब्रजिली फुटबलको पुराना पारखी बज्राचार्य भन्छन्, “ब्रजिलको खेलमा पहिलेको जस्तो स्वाद छैन। ब्रजिली छवि हराए जस्तो, के नपुगे-नपुगे जस्तो खेल। तर आर्जेन्टिना विरुद्धको फाइनल चाहिँ गजब हुनेछ।”
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको खतराका माझ समस्यै समस्याहरूको बीच सुरु भएको कोपामा प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी आलोचना र विवाद भयो। ब्रजिली जनताको तीव्र विरोध, व्यवस्थापकीय कमजोरी, बन्द रंगशाला र युरो कपसँग जुधेको तालिकाका कारण प्रतियोगिताले सोचे जस्तो चर्चा पाएन।
तर एउटा चिज भने सोचे जस्तै, चाहे जस्तै भयो। त्यो हो आर्जेन्टिना र ब्रजिल बीच फाइनल भिडन्त। युरो २०२० मा किन चिनियाँ प्रायोजकको बाक्लो उपस्थिति छ? फुटबल समर्थकलाई ‘खतरनाक’ तनाव परम्परागत फुटबल दुस्मनी विश्व फुटबलमा दक्षिण अमेरिकाको नेतृत्वकर्ता बन्ने होडको विवाद र अहिले निश्चित रूपमा मेस्सी र नेयमार बीचको भिडन्त।
यी कट्टर प्रतिद्वन्द्वी बीच फाइनलमा भेट हुने भएपछि विश्व फुटबलको ध्यान एकाएक माराकाना रङ्गशालामा केन्द्रित हुन पुगेको छ। अब आइतवार बिहानको खेलले दक्षिण अमेरिकी दुस्मनी मैदानमा देखिनेछ। त्यसले पक्कै पनि हलिउड स्टाइलको शीर्षक दिनेछ।
पेले, जिको र गारिञ्चादेखि अल्फ्रेडो डि स्टेफानो, डियागो म्याराडोना र एडोल्फो पेडेरनेरा यही दुई राष्ट्रमा जन्मिए। अनि रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो र काकासँगै गाब्रियल बाटिस्टुटा, रोमन रिक्विल्मे र फेर्नान्डो रेडोन्डोसम्म पनि।
अहिले महानतमको सूचीमा चढिसकेका मेस्सी अनि इतिहास कोर्दै गरेका नेयमार मैदानमै छन्। कोलम्बिया तस्बिर स्रोत,REUTERS
तस्बिरको क्याप्शन, कोलम्बियाले पेरुलाई ३-२ ले हराउँदै कोपा अमेरिका २०२१ प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ
फुटबल भिडन्तको इतिहास आइतवारको भिडन्त हेर्नु अगाडि यी दुई राष्ट्रको फुटबल दुस्मनी सम्झिनै पर्छ।भन्नै पर्दा इतिहासमा आर्जेन्टिना-ब्रजिल बीचको फुटबल महासङ्ग्रामले राम्रा र नराम्रो दुवै इतिहास छोडेको छ।
रामोन मुटिसले ब्रजिलका अर्थर फ्रेडनरिचलाई गरेको फाउल मुक्कामुक्कीमा पुग्यो। त्यसमा पछि दुवै टोलीका खेलाडी नै संलग्न भयो अनि त्यो बढेर दर्शकहरू बीचको भिडन्तमा परिणत हुन पुग्यो।
कुनै खेलाडीलाई रातो कार्ड देखाइएन र खेल ब्रजिलले २-० ले जित्यो। त्यसपछि एक दशकसम्म यी दुईको भेट भएन।ब्राजिलको केही विवादास्पद विजय बाहेक ३० र ४० को दशकमा आर्जेन्टिनाले फुटबलमा दबदबा राख्यो।